Yenza Uhlelo Lwe Lokuyeka Ukuyeka - Ama-802Quits
Ikhaya » Ama-Vermonters » NGIFUNA UKUYEKA » Yenza Uhlelo Lwe lokuyeka
YENZA UHLELO LWAKHO LOKUYEKA
Amathuba akho okuyeka ngempumelelo ugwayi angcono uma unohlelo lokuziyeka olwenziwe ngokwezifiso.
Yini indlela engcono yokuyeka ukubhema, ukuqhuma noma eminye imikhiqizo kagwayi? Ayikho indlela eyodwa efanelekile yokuyeka. Uma uke wazama enye indlela esikhathini esedlule futhi yangasebenza, cabanga ukuzama enye. Sizokuhamba ngezindlela zokwakha nokusebenzisa uhlelo lwakho lokuyeka.
UKUQALA UKUQALA MANJE.
kukhulisa impumelelo yakho. Qedela izinyathelo ezi-6 ezilula zokuthola uhlelo lwakho lokuyekela olwenziwe ngezifiso. Dala uhlelo lwakho lokuyeka ngokulandela lezi zinyathelo ezingezansi. Ungalanda, uphrinte futhi ungeze uhlelo lwakho lokuyeka kumakhalenda akho aku-inthanethi.
BEKA USUKU LWAKHO LOKUPHUMA
Qala ngokusetha usuku lwakho lokuyeka
Khetha usuku phakathi kwamasonto amabili alandelayo. Lokhu kuzokunikeza isikhathi esanele sokuzilungiselela.
USUKU LWAMI LOKUPHUMA
I-nicotine ayikho kusistimu yakho.
Izimpawu zokuhoxa komzimba ziyaphela.
Izifiso ezivela ezinkingeni ezingokomzwelo nezomkhuba zingaqhubeka.
Kunezizathu eziningi zokuyeka ukubhema osikilidi, osikilidi abasebenza ngogesi (ama-e-cigarettes) noma ukusebenzisa ezinye izinhlobo zogwayi. Zonke zilungile. Khetha izizathu zakho. Zizofakwa kuhlelo lwakho olwenziwe ngezifiso i- “My Quit Plan”
BONAKELE ABADLALI BAKHO
Ukwazi izimbangela zakho kukusiza ukuthi uhlale ulawula. Lapho uqala ukuyeka, ungahle uthande ukugwema ngokuphelele izimbangela zakho. Ngemuva kokuhlala ungagwayi isikhashana, ungathola ezinye izindlela zokubhekana nezimbangela zakho. Khetha izimbangela ezibangela ukuthi usebenzise ugwayi. Zizongezwa kuhlelo lwakho olwenziwe ngezifiso i- “My Quit Plan”
Ukuzizwa wehlise umoya
Ukuphola ngemuva kwempi
Ukuya endaweni yokucima ukoma
Ukuya emcimbini wokuzijabulisa
Ukubona omunye umuntu ebhema
LUNGISELELA UKULWA NEZIFISO
Izifiso zihlala kuphela imizuzu embalwa — kepha leyo mizuzu inganqoba. Khetha izinhlobo zezifiso ovame ukuba nazo. Amathiphu wokushaya lezi zinkanuko azongezwa kuzinhlelo zakho “Zami Zokuyeka”.
Ngabe udinga ukugcina izandla nomlomo wakho kumatasa?
Bamba utshani ngesandla bese uphefumula ngawo.
Dlala ngemali noma nge-paperclip ukuze ugcine izandla zakho zimatasa.
Ngabe usebenzisa ugwayi ukuqeda ukucindezeleka noma ukuthuthukisa imizwa yakho?
Prakthiza ukuphefumula okujulile ukuze wehlise umoya noma wenze amanye ama-pushups ukuqhuma umusi.
Phendukela kubangani, umndeni, nabeluleki lapho udinga umuntu ongakhuluma naye.
Ingabe unenkinga yokuhlala umatasa futhi ugcina ingqondo yakho?
Yenza uhlu lwemisebenzi ongayifeza lapho inkanuko ishayisa. Lolu hlu lungafaka imisebenzi yasekhaya, ukuphendula ama-imeyili, ukuthunyelwa kwezinye izinto, noma ukuhlela uhlelo lwakho losuku olulandelayo.
Ingabe uthola ukucasuka nokukhathazeka ngaphandle kogwayi?
Ukwelashwa kokufaka esikhundleni seNicotine (NRT), okufana nezimagqabhagqabha, ushingamu, noma ama-lozenges, kusiza ekunciphiseni izimpawu zakho zokuhoxa. Khuluma nodokotela wakho ukuze ubone ukuthi yiluphi uhlobo lwe-NRT olulungele wena.
Ngabe usebenzisa ugwayi ukukhulisa amandla?
Ukugcina izinga lamandla akho lizinzile, jima njalo futhi ube nokudla okulula okunempilo usuku lonke.
Qiniseka ukuthi uthola ukulala okuningi ebusuku ukukusiza ekuzizweni wephuza emini.
Usebenzisa ugwayi ngoba ujabulisa futhi uziphumulele?
Ziphathe ngendlela ehlukile. Lalela izingoma zakho ozithandayo, hlela ubusuku bebhayisikobho nabangane noma wonge usikilidi wakho, i-e-cigarette, uhlafuna ugwayi noma imali yesinemfu ukuze uthole okumnandi lapho ufinyelela ingqophamlando engenalo ugwayi.
SUSA IZIKHUMBUZO ZOGAQA
Ukubona izikhumbuzo ngogwayi kwenza kube nzima ukuhlala ungagwayi. Susa noma iziphi izikhumbuzo ekhaya lakho, emotweni nasendaweni yokusebenza ngaphambi kosuku lwakho lokuyeka. Ngezansi kunohlu lwezikhumbuzi ezivamile nokuthi ungabhekana kanjani nazo. Lolu hlu luzongezwa ku “My Quit Plan” enziwe ngezifiso
Geza izingubo zakho, ikakhulukazi ibhantshi oligqokayo ukuthatha ikhefu lentuthu.
Hlanza imoto yakho.
Lahla umentshisi, izitsha zomlotha, nanoma iziphi izinkinobho zikagwayi ezingaba ngaphandle kwekhaya lakho.
Beka ukulangazelela izinto zokulwa — njengotshani, ushingamu we-nicotine, noma uhlu lwemisebenzi yasendaweni — ezindaweni ogcine kuzo osikilidi bakho, amathayi omlotha, umentshisi nokokhela.
YEKA NGOSIZO OLWENGEZIWE
I-802quits.org inamathuluzi amaningi okwenza ukuyeka ukuyeka kube lula. Hlola lezi zinsiza bese ukhetha ozithandayo. Zizofakwa ku- "My Quit Plan" yakho uqobo ngolwazi lokuthi uzisebenzisa kanjani.
Shayela ku-1-800-YEKA-MANJE ngosizo olwenziwe mahhala lokuyeka ukuqeqeshwa ngomuntu ngamunye. Abaqeqeshi be-Quitline batholakala ngo-24/7, ngokuxhaswa okwengeziwe nge-imeyili nangombhalo. Kufaka nezimagqabhagqabha zamahhala, izinsini nezinsimbi.
Thola usizo lokuyeka nge-Vermont Quit Partners ukwesekwa kontanga kweqembu elincane. Imihlangano yamasonto onke yamaviki ama-4 kuye kwayi-6 ayatholakala kulo lonke izwe. Kufaka nezimagqabhagqabha zamahhala, izinsini nezinsimbi.
Ku-802quits.org, yeka wedwa ngosizo lwamathuluzi aku-inthanethi nezinsizakusebenza ezinjengamabhodi emiyalezo. Kufaka nezimagqabhagqabha zamahhala, ushingamu namaloli.
Ukusebenzisa imishanguzo kanye / noma i-nicotine replacement therapy (NRT) kungathuthukisa amathuba akho okuyeka okuhle. Khuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthola ukuthi yiziphi izinketho ezingcono kakhulu kuwe.
Tshela abangane nomndeni.
Ukuyeka ugwayi kulula uma uthola ukwesekwa okuvela kubathandekayo bakho.
Okuqukethwe kushintshwe ngemvume evela ku-National Cancer Institute naseSmokefree.gov